कोरोनाले मृत्यु ? नेपालमै घट्यो यस्तो डरलाग्दो घटना हेर्नुस भिडियो सहित... -
कोरोनाले मृत्यु ? नेपालमै घट्यो यस्तो डरलाग्दो घटना हेर्नुस भिडियो सहित…
यो घटना हुनुमा अन्य कारणसँगै अन्तरजातीय प्रेमसम्बन्ध पनि एउटा कारण हुनसक्छ । तर जातीय विभेदमात्र कारण हो भन्ने अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक पुष्टि भने भएको छैन । अर्को कुरा उक्त घटनामा केटाको पक्षबाट आएका सबै दलित मात्र छैनन् । शाही, बुढा, मगर र अन्य जाती पनि छन् । केटा पक्षकै तर्फबाट आउने १८ जना मध्येका एक जना जाजरकोटकै गोबिन्द शाही बेपत्ता नै छन् ।
यसको मतलव उक्त घटनामा केटा र केटीको तर्फबाट दलित, जनजाती र कथित ठुलो जात भनिने मल्ल ठकुरीहरु पनि संलग्न देखिन्छन् । तर मृतकका परिवारले यो घटनाका घट्नुमा अन्तरजातीय विभेदकै रुपमा लिएका कारण केहीले त्यस विषय पनि अथ्र्याएका छन् ।
तर केटी पक्षका आफन्तहरुले अन्तरजातीय भनेर विभेदलाई स्वीकार गरेका छैनन् । उनीहरुले गाउँको लागि यो नौलो कुनै अन्तरजातीय प्रेम वा विवाहको विषय नै नभएको बताएका छन् । सोती गाउँमा नै दलितको छोरी मल्ल परिवारले र मल्ल परिवारले दलितको छोरी लिएर कुनै भेदभावबिनै सहज तरिकाले घरव्यवहार चलाएको तीनचार वटै उदारहणहरु छन् । त्यसकारण दलित र गैरदलित बिचको खाडल नै समस्याको मु्ल जड हो भन्ने हालसम्म कुनै आधिकारिक पुष्टि छैन ।
जसरी उक्त घटनामा वडा अध्यक्षले जातीय भेदभाव गरेको र उनकै नेतृत्वमा घटना घटाइएको भनिएको छ उनी आफैले पनि पुन मगरकी छोरी बिहे गरेका छन् । यसको मतलव वडा अध्यक्ष वा अन्यले गाउँमा अन्तरजातीय बिहे गर्दैमा ती व्यक्तिहरु अन्य अपराधमा संलग्न हुँदैन भन्ने तर्क होइन । तर यसअघि अन्य तीनचार वटा अन्तरजातीय बिहे स्वीकारिसकेको ठाउँमा यसपटक कसरी अन्तरजातीय विभेद भयो, वा उक्त घटना घट्यो त्यो भने फरक पाटो र अनुसन्धानकै विषय छ, र बनाउनुपर्छ ।
← “आफुसंगै बिहे हुन लागेकी केटिलाई पहिलो पटक,भेट्न जादा भयो भयो यस्तो अचम्म”(भिडियो सहित्)
विवाह अघिको गरेको यौ’न स’म्पर्क यसरि थाहा हुन्छ हेर्नुहोस् →